Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games! 1.1.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.8 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ကာစီႏို Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games!
Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဘင်ဂိုကစားအခမဲ့ Play! အော့ဖ်လိုင်း။ အဘယ်သူမျှမကအင်တာနက်လိုအပျ!
ဘင်ဂိုကစားကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်သင့်ရဲ့ဘင်ဂိုကစားကဒ်ပေါ်မှာပြသနေကြပါတယ်ရသောနံပါတ်များကိုမှတ်သားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အနိုင်ရမှပထမဦးဆုံးဖြစ်စေ orthogonally သို့မဟုတ်ထောင့်ဖြတ်တစ်လိုင်းဖွဲ့စည်းရန်မည်သည့်ဦးတည်ချက်5ကပ်လျက်နံပါတ်များကိုရယူပါ။
သငျသညျဘင်ဂိုကစားရတဲ့အခါ, ဂိမ်းအနိုင်ရဖို့အတွက်ဘင်ဂိုကစား button ကို click လုပ်ပါ။
ဘင်ဂိုကစားသူရဲကောင်း: ကာစီနိုဘင်ဂိုကစားဂိမ်းများအခမဲ့ Play စကားပြောခန်း!
ဒါဟာယခုဘင်ဂိုကစားဖို့အချိန်ပဲ! အဆိုပါဆုရမိုဘိုင်းဘင်ဂိုကစား app ကိုနှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းထိပ်တန်းအခမဲ့ဘင်ဂိုကစားဂိမ်းများ Play! ကစားသူအများအပြားဘင်ဂိုကစားဂိမ်းများကိုခံစားကြည့်ပါသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်ဆော့ကစား! ကစားရန် 20 အထက်ကျော်ဘင်ဂိုကစားဂိမ်းများကိုအခမဲ့နှင့်အတူသင်ကမ္ဘာတဝှမ်းအခမဲ့ဘင်ဂိုကစားဂိမ်းများကိုစွန့်စားမှုအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်! ဖလော်ရီဒါ, ဟာဝိုင်ယီ, ပြင်သစ်, အိန္ဒိယနှင့်ပိုမိုအတွက် Play!
ဘင်ဂိုကစားသူရဲကောင်း 75 ဘောလုံးကိုအခမဲ့ချစ်ပ်ကိုအာမခံကြောင်းဘင်ဂိုကစားခန်း, ထီပေါက်, စူပါအထူးကျည်, ကို manual နဲ့ automatic marking, ဆုကြေးငွေအဆင့်ဆင့်နှင့်ပရိုမိုးရှင်းကမ်းလှမ်းတဲ့ဂိမ်းပါ!
သငျသညျရှေးခယျြစရာတစ်ခုကွဲပြားခြားနားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဤနေရာတွင်ဘင်ဂိုကစားသူရဲကောင်းမှာ The Best ဗီဒီယိုကဘင်ဂိုကစားစက်တွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တစျခု, လေးသို့မဟုတ်ခြောက်လကတ်များနှင့်အတူဗွီဒီယိုကိုဘင်ဂိုကစား Play အပိုနှင့် SUPER အပိုဘောလုံးနဲ့အတူကစားကြီးမားသောထီပေါက်အနိုင်ရကြီးတွေအလောင်းအစား!
အခြားအဘင်ဂိုကစားဂိမ်းထက်ပိုဘင်ဂိုကစားကတ်များနှင့်အတူဘင်ဂိုကစားသူရဲကောင်း Play! တစ်ပြိုင်နက်တည်းအထိ6ဘင်ဂိုကစားကတ်များနှင့်အတူကစားခြင်းဖြင့်သင့်ကံစမ်းကြည့်ပါ!
ဘင်ဂိုကစားအောင်မြင်မှု & ပဟေဠိအဖွဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဘင်ဂိုကစားဂိမ်းရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စာရင်းထဲတွင်မိတ်ဆွေများကိုဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်! အခမဲ့ဂိမ်း Play နှင့်အရှိဆုံးဘင်ဂိုကစားကတ်များဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအရာတွေ့မြင်! သင့်ရဲ့နေ့စဉ်, အပတ်စဉ်အောင်မြင်မှုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဆုလာဘ်ရယူပါ။
အခမဲ့ဘင်ဂိုကစားကစား - တိုင်း4နာရီကစားရန်အခမဲ့ဒင်္ဂါးပြားရ
FUN ဘင်ဂိုကစားခန်းနှင့် mini ဂိမ်း
6 ဘင်ဂိုကစားကတ်များမှတက် PLAY
အော့ဖ်လိုင်း Play သို့မဟုတ်လွန်းအခမဲ့အွန်လိုင်း play! သင်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးကစားနိုင်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ဂိမ်း SPEED ပြောင်းရွှေ့ရန် - သငျအဖြစ်ပိုမိုမြန်ဆန်သို့မဟုတ်နှေးကွေးကျေးဇူးပြုပြီး play
ဘင်ဂိုကစားသူရဲကောင်းကစားရန်ထိုကဲ့သို့သောပျော်စရာဂိမ်းပါ! ဘင်ဂိုကစားကတ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဂန္ထဝင်လောင်းကစားရုံဘင်ဂိုကစားအပိုင်းပိုင်းအနေနဲ့တွန်းလှန်, ပျော်စရာအချိန်စေသည်! ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားကစားသမားနှင့်အတူဘင်ဂိုကစား Play ။ အခြားမည်သည့်ဂိမ်းထက်ပိုဘင်ဂိုကစားကတ်များနှင့်အတူ, သငျသညျအနိုင်ရအံ့သြစရာအခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိပါသည်! ဒါကြောင့်အဘယျသို့သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေလဲ? သင့်ရဲ့ဘင်ဂိုကစား daubers ထွက် Get ထွက်ခေါ်ဆို စတင်. "ဘင်ဂိုကစား!"
သငျသညျဘင်ဂိုကစားကိုချစ်ပြီးပျော်စရာအသစ်ကဘင်ဂိုကစားဂိမ်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘို့အဦးတစျခုလုံးကိုသစ်ကိုဘင်ဂိုကစားကမ္ဘာကြီးကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါသည်!
Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games! အား အခ်က္ျပပါ
hunter02 စတိုး 119 127.1k
Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games! အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.8
ထုတ်လုပ်သူ Saga Fun,Slots,Casino,Slot Machines,Bingo,Poker!
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.sagafun.com/privacypolicy.htm
App Name: Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games!
Release date: 2019-08-13 11:51:25
လက်မှတ် SHA1: 0E:9B:B9:02:C2:CA:D2:D0:1A:D7:B6:30:03:54:61:97:33:FE:69:2B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): saga
အဖွဲ့အစည်း (O): sagafunteam
နယ်မြေ (L): cd
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): sc
Bingo Hero - Best Offline Free Bingo Games! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ